Ny mpandinika biochemika mandeha ho azy mifototra amin'ny teknolojia microfluidic dia nampiharina tamin'ny andrim-pitsaboana an'aliny eran'izao tontolo izao.
Aorian'ny fampidirana ny ra manontolo anticoagulated, ny dingana manontolo avy amin'ny fisarahana amin'ny plasma, ny quantification, ny fandefasana, ny fampifangaroana, ny fanehoan-kevitra amin'ny valin'ny fitsapana fanontana dia mety ho vita ho azy ao anatin'ny 7 minitra eo ho eo.Ny analyse dia manana rafitra fanaraha-maso kalitao manan-tsaina, izay mora ampiasaina sy ianarana.
2022 Amazon Hot Sale Massage Cushion Electric 12V Vibration Massage Mat miaraka amin'ny fanafanana ho an'ny Seza seza birao an-trano
Tena mahazo aina!!
Rafitra vy karbaona, vita amin'ny volafotsy;Nylon anatiny dia mateza, maivana, tsara tarehy ary mora diovina.
Joystick Controller ho an'ny fiakarana tohatra azo entina Handcycle Moto Electric Scooter Electric seza misy kodiarana
Maivana sy azo entina entina entina, malefaka, mahazo aina.
Ny Accessories ho an'ny sembana elektrika ho an'ny kilemaina dia manome vidin'ny kojakoja charger mijoro mijoro mijoro sembana
Maivana & Mahazo aina & Mora.Tohanana mitondra fiara marobe.Ny lafo indrindra, manan-tsaina, fiarovana.
Seza misy kodiarana azo aforitra maivana Joystick Controller seza misy kodiarana elektrika
Ultra maivana, hery avo, portable sy compact, aluminium + magnesium, manohana hatramin'ny 130kg, motera novolavolain'ny tena.
Tabilao fanodikodinam-pandrefesana vaovao azo amboarina, fanitsiana ny fihenjanana amin'ny lamosina, vonona ny handefa ny hazondamosina
Manamaivana ny tsy fahampian'ny lumbar
Samy misy seza na mandry
2022 Fihetseham-po amin'ny hazondamosin'ny hazondamosina Fitsaboana andriamby ho an'ny hazondamosina Fanohanana an-damosina Massager Fanaintainan'ny hazondamosina manamaivana ny kiropraktika Shiatsu Back Stretcher
Manamaivana ny tsy fahampian'ny lumbar,
Gears telo dia azo amboarina,
Fandoroana malefaka azo averina azo ampiasaina indray sarony ratra Lafoplasty tsy tantera-drano Bandage fiarovana Saron-tongony
Malemy sy mahazo aina
Misy habe maro
2022 Fiavian'ny vaovao tsy tantera-drano Vacuum Tombo-kase tombo-kase fanariana ho an'ny sandry fanasan-damba
Vokatra vaovao 2022 Kojakoja fikarakarana ratra tsy tantera-drano Catheter PICC Line Cover ho an'ny fandroana fandroana
Fiarovana ratra/PICC, douche azo antoka
Gel silica medikaly, azo antoka & mahazo aina
High elastic, tsy very endrika